Go'aanka sicir-dhimista ee 50 ee Gaadiidka Dadweynaha ee Izmir | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 Izmir50 Go'aanka Sicirada Sare ee Gaadiidka Dadweynaha ee İzmir
50 Go'aanka Sicirada Sare ee Gaadiidka Dadweynaha ee İzmir
22 / 04 / 2019 35 Izmir, tareenka, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Metro, TURKEY, taraamka
Kalfadhigii ugu dambeeyay ee Golaha Dawladaha Hoose ee Magaalada Izmir bishii Abriil, Warbixinta Sannadlaha ah ee Dawladda Hoose ee 2018 ayaa laga wada hadlay. Warbixinta, in kasta oo codadka wanaagsan ee CHP iyo GOOD Party, AK Party iyo Golaha MHP ee diidmada codbixinta la meel mariyey. Go'aanka lagu dhimayo boqolkiiba 50 ee gaadiidka waqtiyada qaarkood ayaa sidoo kale baarlamaanka ansixiyay.
Golaha Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir bishii Abril ee la soo dhaafay, ayaa la qabtay. Golaha dhexdiisa, Warbixinta Guddiga Qorsheynta iyo Miisaaniyadda ee 'Mashruuca Codsiga Gaadiidka Dadweynaha' ayaa laga wada hadlay. Xubnaha baarlamaanka, 29 subaxdii Abriil 06.00-07.00 subaxnimo iyo fiidkii 19.00 iyo 20.00 saacadood inta u dhaxaysa dhimista boqolkiiba 50 ee go'aanka si loo dabaqo. Golaha dhexdiisa, Warbixinta Waxqabadka Dawladda Hoose ee Magaalaweynta 2018 ee sanadka ayaa laga wada hadlay. Kooxda CHP oo ka hadlaysay warbixinta SözcüSü Nilay Kökkılınç, iyadoo tixgelinaysa XXXX sano ee lasoo dhaafay, inkasta oo dhibaatooyinka dhaqaale ee wadanka ka jira ay sheegeen inay arkeen in Dowlada Hoose ee Izmir ay sii wado maalgashi. Kökkılıç wuxuu xusay in maalgashiga bey'ada, 15 uu yareeyay qiiqa kaarboonka hawada ilaa İzmir 2020 oo yiri, yatırım Maalgelinta nidaamka tareenka wuxuu yareynayaa raadkeenna karboonka. Dhanka gaadiidka, nidaam bey'ad deegaanka iyo raaxo leh ayaa la sameeyay. Waxaan bilownay inaan ka shaqeyno Narlıdere Metro waxaan sugeynaa ogolaanshaha Wasaaradda Buca Metro. Shabakaddeenna gaadiidka badda ayaa koray isla markaana ah gaadhiga '20 pier pier'. Xilliga soo socda, gaadiidku wuxuu noqon doonaa mudnaantayada.
Madaxweyne ku xigeenka MHP Selahattin Şahin ayaa u mahadceliyay kuwa soo saarey warbixinta oo yiri, “İzmir wuxuu u baahan yahay maalgashi iyo adeeg dheeraad ah. Dhibaatada taraafikada. Waxaan ku noolahay Gaziemir. Galid Ma galo Gaziemir Waxaa la sheegay in mashaariicda wadooyinka la qaban doono, oo aan la qaban. Xilliga cusub, dhibaatooyinka waa in la sameeyaa iyada oo loo eegayo mudnaanta. Isbeddelka magaalada ayaa billowday laakiin intee ayey bilaabatay. Waxaan u maleynaynaa in abaabul adeeg deg deg ah lagu bilaabi doono awoodeeda iyo mucaaradka ..
Qiimaha 50 ee Gaadiidka Dadweynaha ee Kayseri
50 Discount ee Bursa
Dawladda Ruushku waxay go'aansatey in ay carruurta ka saarto tikidhada tareenada
Gawaarida Gaadiidka Dadweynaha Izmir, Tirada Tigidhada Ardayda Ayaa Imanaysa
Kaarboonka Carbon ee Izmir
Qiimo dhimis Gaadiidka Dadweynaha ee Izmir
Sare u qaadista gaadiidka ee Izmir
Mashaariicda wadooyinka ee İzmir
Mashruuca Codsiga Gaadiidka Dadweynaha
Saldhiga Metro ee Narlidere
Tikidhka ugu Wanaagsan ee Tilmaamaha ahaa Tareenka Xawaaraha Sare!